Waxaa la sheegay in maamulka uu heli karo dhammaan howlaha kombiyuutarka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo qaarkood oo xitaa maamulka ayaa wajahaya dhibaato iyo halkan waxa ay noqon kartaa mid niyad jab. Waxaa mararka qaar adag tahay in ay tirtirto faylasha qaar ka nidaamka kaas oo waxaa jiri kara dhowr sababood.
Noocyada files undeletable iyo sababaha ma ay la gacanta tirtiri karaa.
Files Undeletable guud ahaan spywares, malwares, alaabtaadu ad ama faylasha qoriga. Sidoo kale waxay ka mid yihiin files caadi ah oo hadda la isticmaalo nidaamka iyo halkan ka hortagtaa in ay tirtirka. Waxaa jira dhowr sababood oo hana u oggolaan in faylka in la tirtiro. Waxaad ka heli farriimaha kala duwan sida:
1. ma tirtiri kartaa file: Helitaanka beeniyay.
2. file waxaa loo isticmaalaa by barnaamij kale ama user.
3. Isha ama halka file waxaa laga yaabaa in la isticmaalo.
4. Waxaa uu ahaa qaybsiga xadgudub.
5. Hubi disk ma buuxsanto, ama wax ka qoraan ilaaliyo iyo in faylka ay haatan tahay mid aan la isticmaalayn.
Fariimahaasu waa runtii aad u adag tahay in ay tirtirto files iyo iyadoo aan loo eegayn inta jeer ee aan isku dayno, faylasha, kuwaas oo aan la tirtiri karo si fudud adiga oo riixaya badhanka tirtirto. Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo la raaco karaan in ay tirtirto, kuwaas oo nooca files.
Jidka Kowaad: Isticmaalka amarka dhakhso ah u furmo suuqa
Tani waxay u ogolaaneysaa in aad tirtirto faylasha undeletable aan isticmaalin wax barnaamijyadooda xisbiga saddexaad. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay xoogaa aqoon farsamo si ay u isticmaalaan habkan.
Talaabada 1: Riix 'Start' button oo ka dibna ku qor 'Command degdeg' ama 'Lauch' sanduuqa raadinta iyo riix gala 'muhiim ah.
Talaabada 2: natiijada baaritaanka A muuqataa. Midig u guji icon "Si degdeg ah Command 'ka natiijooyinka raadinta iyo guji" Orod sida maamulaha' ka mid ah liiska muuqata.
Talaabada 3: waxaa lagu daahfuri doonaa oo kuu ogolaanaya inaad si ay u fuliyaan amarrada aan xannibaad kasta oo heer maamulaha amarka dhakhso ah u furmo suuqa.
Saan ee amarka ah ee la tirtiro file ah u eg hoos ku qoran:
DEL: waxay u taagan tahay doorasho delete
/ F: waxay u taagan tahay ciidamada tirtirto doorasho
/ Q: waxay u taagan tahay doorasho hab arrin.
/ A: waxay u taagan tahay file kala duwan yeelaa sida akhriyo keliya, qarsoon, diyaar u archiving, iwm
/ C: waxay u taagan tahay wadid aad ugu weyn. In badan oo kiisaska, waa "C:" drive
Talaabada 4: Tusaale ahaan waxaad u baahan tahay in ay tirtirto file la odhan jiray joogo 'virus.exe ee desktop-ka, ka dibna ku soo galaan amarka sida ku cad iyo riix gala' muhiim ah.
Tani tirtiri doonaa file ka yimid nidaamka.
Jidka labaad: Isticmaalka FileASSASIN
FileASSASIN waa barnaamij lacag la'aan ah oo loo isticmaalo in ay tirtirto files undeletable ka nidaamka. Waxaad ku soo bixi kartaa adiga oo raadinaya ka siiyaa biraawsarkaaga ama adigoo gujinaya linkiga hoose ku siiyey;
Talaabada 1: Marka aad soo bixi FileASSASIN, furo barnaamijka by double gujinaya ay icon. Interface ugu weyn ee barnaamijka u eg yahay sida hoos ku qoran:
Talaabada 2: Hadda riix icon caleenta ah (icon qaabeysan si afar gees iyadoo seddex dhibcood ku xiga si ay boos banaan) in ay doortaan faylasha aad rabto inaad tirtirto.
Talaabada 3: Browse faylka aad rabto in aad tirtirto ka dibna laba jibaar guji ku yaal in ay doorasho. Marka aad leedahay dooro file in la tirtiro, guji sanduuqa ku xiga si ay 'Delete file' doorasho in ay doorasho. Tick ​​A buluuga ah in doorasho loo doortay.
Tallaabada 4: Ugu dambeyntii guji 'ah oo Toogtay' doorasho in ay tirtirto faylka. Your file hadda waa laga tirtirayaa.
Saddexaad hab: takhalusid files gacanta
Mid ka mid ah habka ugu fudud ee la tirtiro file ah undeletable waxaa la samayn karaa si fudud u baddalay file kale ee magaca la mid ah oo kordhin. Tan waxaa la samayn karaa si fudud sida hoos ku qoran. File u malaynaysaan magacaabay 'SoftwareU' waa file undeletable.
Talaabada 1: fur file a buugayga cusub oo ku saabsan habka ugu fudud nooca wax nasiib ah waxa ku jira. Hadda, riix 'File' doorasho ka dibna riix 'Save sida'.
Talaabada 2: Haddaba, xulo meesha uu badbaadiyo ee buugayga sida la mid ah halkaas oo files undeletable joogaan. Ka dib markii ay sidaas samaynaya, doortaan nooca faylka sida oo ahaa 'Dhamaan files' hoos 'Save sida nooca' doorasho.
Talaabada 3: Hadda, guji faylka undeletable mar si magaca faylka undeletable la koobiyeyn doonaa 'File magaca' ee doorasho. Ku dar mark oraah ee bilowga iyo dhamaadka ah ee magaca faylka sida hoos ku qoran iyo click ku saabsan 'Save' doorasho.
Talaabada 4: Hadda, fariin arbushin doonaa weydiinaya 'Ma rabtaa in aad overwrite iyo bedelo file jira? . Riix 'Haa' iyo faylka undeletable si toos ah bedeli doona file cusub buugayga. Hadda, waxaad tirtiri kartaa file buugayga oo ay si fudud u xulashada iyo riixaya badhanka 'tirtirto'.
Halkan waa wax yar oo ka mid ah Talooyin iyo tabaha in aad u baahan tahay in aad ka ogaato marka falalkan.
1. Waxaa guud ahaan lagula taliyo in uu barnaamijka antivirus ah in aad nidaamka, taas oo kor u yahay in taariikhda si looga hortago in aad nidaamka ka malwares, spywares iyo fayrusyada oo la abuuro files undeletable aan loo baahnayn.
2. Waxaa caadi ahaan fiican in la qaato talada khabiir ku ah ka hor inta fulinaya howl nidaam aan la garanayn.
> Resource > masixi > 3 Siyaabaha Delete Undeletable faylasha in aanad garanayn About